Ndị na-emepụta akpa mkpanaka & ndị na-ebubata - Ụlọ ọrụ akpa mkpanaka China
Azụ Oxford Waterproof Soft Rod Akpa 51 inch ogologo
Akpa mkpara dị nro nke azụ azụ 51 inch ogologo, ọrụ dị arọ 600D oxford, enweghị mmiri, na-adịgide adịgide na mgbochi ịkpụ, dị mma iburu ma were eriri ubu abụọ were azụ.Ihe gburugburu ebe obibi.Igwe abụọ ma ọ bụ atọ - oyi akwa, ogologo site na 110-150cm, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ihe No.LSF 3001
Agba:Green ma ọ bụ camouflage ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Azụ Oxford Waterproof Soft Rod Akpa 47 inch ogologo
Akpa mkpanaka dị nro nke azụ azụ 47 inch ogologo, ọrụ dị arọ 600D oxford, enweghị mmiri, na-adịgide adịgide na mgbochi ịkpụ, dị mma iburu ma were otu eriri ubu abụọ ma ọ bụ abụọ were azụ.Ihe omume enyi na enyi.Igwe abụọ ma ọ bụ atọ - oyi akwa, ogologo site na 50-120cm, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ihe No.LSF 3002
Nha:47L * 5W * 5H Inch maka nha oyi akwa 2
Agba:Green ma ọ bụ oji ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Azụ ABS/PC/ Alloy Hard Rod Case 51 inch ogologo
Akpa mkpara siri ike ịkụ azụ 51 inch ogologo, ABS ihe, waterproof, mgbochi unyi na mmanụ, inogide, adaba na-ebu site roba straps, ogologo si 50-120cm, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ihe No.LSF 3003
Nha:51L * 2.5W * 2.5H inch
Ihe:ABS ihe, ma ọ bụ PC ma ọ bụ Alloy.
Agba:Blue, ma ọ bụ ọlaọcha ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Azụ ABS/PC/ Alloy ike mgbochi mmiri mkpanaka akpa 49 inch ogologo
Ịkụ azụ ABS siri ike mgbochi mmiri akpa 49 inch ogologo, ABS / PC / Alloy ihe, waterproof, mgbochi nrụgide na mgbochi ịkpụ, na mma na-agbanwe, adaba na-ebu site straps, na bracket na ike iguzo n'ala, ogologo si 80- 130cm, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ihe No.LSF 3004
Nha:49L * 5.5W * 5.5H inch
Ihe:ABS siri ike ihe
Agba:Black, Kọfị, Grey, Blue ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịkụ azụ ABS/PC/ Alloy ike mgbochi mmiri mkpanaka akpa 35 inch ogologo
Azụ ABS siri ike mgbochi mmiri akpa 35 inch ogologo, ABS / PC / Alloy ihe, waterproof, mgbochi nrụgide na mgbochi ịkpụ, adaba na-ebu site roba straps, ogologo si 90-150cm, ma ọ bụ dị ka ahaziri, nnukwu afọ ịkụ azụ ike akpa.
Ihe No.LSF 3005
Agba:Blue ma ọ bụ dị ka ahaziri.